China Cast iron isakhelo imodeli ED10 injini block Manufacture kunye Factory |Zhengheng
Ibhlokhi ye-injini ye-aluminiyam ...
Injini yefeni ethwele ialuminiyam...
Cast i-aluminiyam injini sprock...
Izindlu zokunciphisa intsimbi
Cast imodeli yentsimbi isakhelo ED10 injini block
Igama lemveliso: Isakhelo
Umzekelo: ED10 phantsi kwesakhelo
Imodeli yesicelo: Ilori yokulanda i-Great Wall Wind Jun, ilori ye-Great Wall gun
Ubuncinci bobungakanani bomyalelo: uthethathethwano
Iinkcukacha zokupakisha: ukupakisha komntu ngamnye + ibhokisi ye-laminate;215cm * 185cm 20 amaqhekeza / ityala
Ixesha lokuhambisa: 35 ~ 60 iintsuku zokusebenza
Intlawulo: t/T, L/C
Umthamo wokubonelela: 100000 PCS/ngonyaka
Isixhobo sokubumba isanti
Ukuphosa i-arhente yokunyanga i-sulfonic acid
I-arhente yokususa ifilimu yeFuran
Isanti ngundo ukutyabeka
Intsimbi enyibilikisiweyo yokugalela isakhelo
Isakhelo emva kwemathiriyeli yenkqubo yokuphosa
Ivili lokusila ngeCeramic
Product parameters technical
Izinto eziphathekayo: HT300
Ubunzima bemveliso: 21KG
Ubungakanani bemveliso: 380 * 400 * 270.5
Isakhelo sentsimbi esakhiweyo esiveliswe nguZhengheng Amandla sisetyenziselwa iGreat Wall picard feng Jun kunye nothotho lwemipu yaseGreat Wall.Isakhelo yinxalenye edityaniswe phakathi kwebhloko yesilinda ye-injini kunye nepani yeoli.Idlala indima yokuxhasa i-crankshaft kunye nokuvala indawo engezantsi yebhloko yesilinda.
Ngaba umenzi oqeqeshiweyo wesakhelo somzimba we-cylinder ovela eTshayina, sithengisa iimveliso ezikumgangatho ophezulu, ngokwemizobo yesakhelo sophando oluhlangeneyo kunye nophuhliso kunye nokuveliswa, sinenkxaso yobuchwephesha kunye neqela lenkonzo egqibeleleyo emva kokuthengisa, kunye nemveliso yobungcali kunye nolawulo, imveliso ephezulu. izixhobo, ukuqinisekisa umgangatho wethu kunye nexesha lokuhambisa, inkampani iqhuba umgaqo wokholo oluhle, umgangatho ophezulu, ukusebenza kakuhle.Siyaqinisekisa ukuba inkampani iya kuzama konke okusemandleni ethu ukunciphisa iindleko zokuthengwa kwabathengi, ukunciphisa umjikelo wokuthenga, ukuzinzisa umgangatho wemveliso, ukuphucula ukwaneliseka kwabathengi, kunye nokufezekisa imeko yokuphumelela.Ndijonge phambili ekusebenzeni nawe!
Ithuba elihle lokhuphiswano
1. Sigxininise kwigobolondo, isakhelo, iinxalenye zesakhiwo kunye nazo zonke iintlobo zentsimbi etyhidiweyo, iindawo ze-aluminium ezenziwe nge-aluminium, kunye neminyaka emininzi yophando kunye namava okuvelisa imveliso kunye nokuqokelela imboni.
2. Siye sasebenzisana ngempumelelo namashishini amaninzi kwihlabathi liphela, kwaye sinabasebenzi abachwepheshile abathengisa ngeelwimi ezahlukeneyo.
3. Gxininisa kwi-OEM yokwenza ngokwezifiso, unokufumana umgangatho olungileyo kunye nelona xabiso likhuphisanayo kuthi.
4. Uphumelele isiqinisekiso senkqubo ye-IATF 16949 yamazwe ngamazwe, imveliso esemgangathweni.
5. Uphuhliso olulungelelanisiweyo, ukusuka ekujuleni ukuya kumatshini ukubonelela ngenkxaso yobugcisa obuqinileyo, umthengi omtsha uphuhlisa izinga lempumelelo lifikelele kwi-100%.
6. Ngelo xesha, sinefektri yokuphosa kunye nomatshini wokucoca umatshini, ukubonelela ngeemveliso ezigqityiweyo ezigqityiweyo ukusuka kwi-mold, casting and processing.
1. Ukupakishwa kwangempela: 1PC / iqhekeza, iziqwenga ze-30 / ibhokisi (ubuninzi buxhomekeke kwimveliso);Ukupakishwa kweplastiki + ukuthumela ngaphandle kwebhokisi yelaminate
2. Ukupakishwa okukhethekileyo: kungenziwa ngokwezifiso, wamkelekile ngokufudumeleyo ukuba uqhagamshelane nathi ngolwazi olungakumbi.
1. Ukupakishwa okusemgangathweni kokuthumela ngaphandle, ukupakishwa okuqinileyo ukuqinisekisa ukuthunyelwa kwexesha elide kunye nokuvakalisa ngamazwe ngamazwe.
Sinabasebenzi abaziingcali zokulungisa iimpahla, ukupakisha kunye nokupakisha ukuqinisekisa ukuhanjiswa ngexesha kunye nokupakishwa okuqinileyo.
3. Abathengi banokukhetha i-arhente yabo yeenqanawa okanye i-arhente yethu yentsebenziswano yexesha elide.
1. Indawo yesakhelo: Ukuba kukho uluhlu lwempahla, ngokuqhelekileyo iintsuku eziyi-15-20 emva kokufumana intlawulo zingahanjiswa.
2. Ukulungiswa kwesakhelo: iisampuli ziya kuhanjiswa phakathi kweentsuku ezingama-30-65 emva kokufumana imizobo esemthethweni.(Kuxhomekeke kwimveliso ethile)
1. Yamkela imveliso ye-OEM
2. Hambisa iimpahla kubathengi bethu ngokukhawuleza nangokuchanekileyo.
3. Iqela lobuchwephesha lobuchwephesha kunye nenkqubo engqongqo yokulawula umgangatho, ukuqinisekisa ukuba ezona ndawo zingcono ezandleni zakho.
4. Ukuthengwa kwe-One-stop ye-cast iron parts, iindawo ze-aluminium ezenziwe nge-aluminium kunye nezindlu zokunciphisa ukukunceda ukunciphisa iindleko zokuthengwa kwamacandelo.
I-5, ukubonelela ngeemveliso ezisemgangathweni, inkonzo esemgangathweni, ixabiso elikhuphisanayo kunye nokunikezelwa ngexesha elifanelekileyo.Iimveliso zethu zithengisa kakuhle ekhaya nakwamanye amazwe.Inkampani yethu izama ukuba ngomnye wababoneleli ababalulekileyo eTshayina.
1. Umbuzo: Ngaba ndingayongeza i-logo yam kwimveliso?
Ewe, wamkelekile uphawu lwesiko, imveliso ye-OEM.
2. Umbuzo: Ngaba unokusebenzisa imizobo yethu ukuphuhlisa iindawo?
Ewe, nceda unike imizobo eneemfuno zobugcisa ukukhusela amalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda.
3. Umbuzo: Ngaba kufuneka ndihlawule umrhumo wokubumba kwakhona kwixesha elizayo xa ndiyalela?
A: Ayisetyenziswa kubomi bokungunda.Emva kokuba ubomi bokungunda buphelile, kunokuxoxwa ngokwemfuno.
A: T / T 50% idiphozithi, 50% phambi kokuthunyelwa.Siza kukuthumelela imifanekiso yeempahla ezipakishwe ngokupheleleyo phambi kokuba zithunyelwe
5. Umbuzo: Ulenza njani ishishini lethu libe nobudlelwane obuhle bexesha elide?
Impendulo: 1. Sigcina umgangatho omhle kunye namaxabiso akhuphisanayo ukuqinisekisa ukuba abathengi bethu bayazuza;
2. Siyabahlonipha bonke abathengi kwaye sibajonga njengabahlobo bethu.Siqhuba ishishini nabo ngokunyanisekileyo kwaye senza abahlobo nokuba basuka phi na.
Imfundiso yethu "yimfezeko kuqala, umgangatho kuqala".Siqinisekile ukukubonelela ngenkonzo esemgangathweni kunye neemveliso ezifanelekileyo.Sithemba ngokunyanisekileyo ukuseka intsebenziswano yokuphumelela ishishini nawe kwixesha elizayo!
Ngaphambili: I-7H yentloko ye-injini ye-diesel
Okulandelayo: Ibhlokhi yenjini yeAluminiyam H15T
Ibhlokhi yeNjini ye-1kd
1kd Injini yesilinda Block
Ibhlokhi yeNjini ye-2kd
2kd Injini yesilinda Block
2tr ibhlokhi yeNjini
2tr Injini yesilinda Block
350 Ibhlokhi yeNjini
350 I-injini yesilinda Block
Ibhlokhi yeNjini eprintiweyo ye-3d
Ibhlokhi yeSilinda yeNjini ye-3d yoShicilelo
3sz iBloko yeNjini
3sz Injini yesilinda Block
4d56 Ibhlokhi yeNjini
Ibhlokhi yeNjini yeDizili
I-Engine Block Blank
I-Engine Block Castings
Abavelisi beBhloko yeeNjini
I-Engine Block ye-Oem
IMveliso yeBlock yeNjini
I-injini ye-Cylinder Block Manufacturer
Injini yeSilinda Block Supplier
Injini yefeni ethwele iinxalenye zealuminiyam